Wasaarada caafimaadka Soomaaliya oo xaalado cusub shaacisay | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Wasaarada caafimaadka Soomaaliya oo xaalado cusub shaacisay
Wasaarada caafimaadka Soomaaliya oo xaalado cusub shaacisay
Wasaaradda Caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlada Fedraalka Soomaaliya ayaa xogta Feyruska Karoona ku sheegtay in 48-kii saac ee lasoo dhaafay laga baaray cudurka dad ay tiradoodu gaarayso 3,410, waxaana laga helay xanuunka 323 qof oo dadkaas ka mid ah kuwaas oo laga diiwaangeliyay Muqdisho & Gobolada dalka ee Soomaaliya.
Dadka Cudurka laga helay ayaa waxaay kala joogaan, Soomaaliland 241 qof, Puntland 48 qof, Jubbaland 18 qof , Koonfur Galbeed 12 iyo Banaadir iyo deegaanada maamulka Galmudug ayaa laga diiwaangeliyay min 5 qofood.
Sidoo kale Warka kasoo baxay Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dadka cudurka laga helay ay kala yihiin 187 Rag ah iyo 136 Dumar ah, halka cudurka ay u geeriyoodeen 15 Ruux, iyadoo ay ka soo bogsadeen 110 qof saacadihii ugu danbeeyay guud ahaan dalka Soomaaliya.
Guud ahaan Cudurka safmareenka ah ee COVID-19 ayaa waxaa Soomaaliya laga diiwaangeliyay 20,900 xaaladood 1,152 dhimasho ah, halka ay ka bogsadeen 9,815, kuwaasoo ku kala sugan Magaalada Muqdisho & Gobolada dalka.
Wasiirka Wasaaradda caafimaadka dowlada Soomaaliya Marwo Fowsiya Abiikar Nuur ayaa ugu baaqday dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay qaataan talooyinka caafimaad ayna dhaqan geliyaan tillaabooyinka lagu xakameynayo COVID-19, si guul looga gaaro dadaallada sare loogu qaadayo bed-qabka bulshada iyo ka guulasiga cudurka.
Previous articleMaamulka Puntland oo sheegay qofkii aan anshuurta bixin inuu shabaab la mid yahay
Next articleDHAGEYSO:Munaasabad lagu dhiiragalinayay dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo Muqdisho lagu qabtay